Malaza ankehitriny ny fanamboarana ny rafi-pampianarana eto amintsika. Anisan'izany ny fanovana ny tetiandrom-pampianarana, ny fanafoanana ny fanadinana CEPE ary ireo zavatra maro hafa.
Zaza kanto sy mandroso
Tena mahafinaritra ny fitondrana ireo zandry kely mpihira mitety tany sady manohana ny ekipa Malagasy.
Ny tena andraikitra no tokony horaisina
Tsara avokoa ny endrika ivelany naseho nandritra iny fetim-pirenena iny.
Fa inona moa marina moa ny « politika » ?
Maro amintsika no diso hevitra momba ny politika eto Madagasikara sy eto Afrika.
ndrisy nefa fa fomba fiteny fotsiny ihany izany fa raha ny fihetsika atao dia tsy mijery ny tena fototra izany ny mpitondra. Ahoana tokoa moa ny hiheverana fa ny zanak’ireo tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena dia mianatra any amin’ny sekoly tsy miankina avokoa ? Tsy misy na iray aza no mahita ny tena fahorian’ireo zaza madinika eny amin’ny sekolim-panjakana. Eny fa na hatreny amin’ny oniversite aza, dia matetika mandeha manohy fianarana any ampita ny zanak’ireo tompon’andraikitra. Dia ho tsapan’ireo tompon’andraikitra ve ny tena olana misy eo amin’ny fampianarana Malagasy ?
Sodokan’ny any ivelany
Angamba mety efa fantany ihany fa lany andro sy tsy mahomby ny fampianarana ho an’ny daholobe dia izay no antony tsy andefasany ny zanany any. Eo amin’ny lafiny fitsaboana ihany koa dia hitam-poko hitam-pirenena fa ireo olona ambony sy ny fianakaviany rehefa sanatria marary dia lasa mamonjy toeram-pitsaboana tsy miankina na any ivelany. Ahoana moa no ahafantarany ny tena fahoriana mahazo ireo marary eny amin’ny hopitaly Malagasy raha toa ka tsy mandingana ny varavaran’ireny hopitaly ireny akory ry zareo ? Ekena fa namboarina ny hopitaly manara-penitra fa ny maha hopitaly ny hopitaly dia tsy ny trano fa ny fitsaboana sy ny mpitsabo ao anatiny. Izany tokoa no tena hoe midina ifotony raha mahavita mamoaka didy ny mpitondra fa ny zanak’ireo tompon’andraikitra ambony rehetra dia mila mianatra any amin’ny fanjakana, ary ny fianakaviana dia tokony hotsaboina eny amin’ny hopitalim-panjakana raha mbola azo atao. Mety hihatsara haingana tokoa ny fampianarana sy ny fitsaboana eto amintsika amin’izay fotoana izay satria mifandray mivantana amin’ireo tompon’andraikitra sy ny fianakaviany.